Maitiro Ekudzima Verenga Verenga Risiti Pane iPhone: Iyo Chaiyo Kugadzirisa! - Iphone
tsvaga sync pane iphone 6
iphone 6 matambudziko ekubatanidza wifi
iphone 7 isiri kudzoreredza kubva backup
chii chinonzi hdr foto pane iphone
Maitiro Ekudzima Verenga Verenga Risiti Pane iPhone: Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Iwe haudi kuti vanhu vazive kana iwe waverenga yavo iMessages, asi iwe hauna chokwadi kuti ungazviita sei. Isu tese tinoziva shamwari iyoyo kana nhengo yemhuri inoshatirwa kana ukasapindura ipapo! Muchinyorwa chino, ndicha ratidza maitiro ekudzima kuverenga maretiiti pane iPhone kuti vanhu vasazive kana iwe wavhura uye kuverenga yavo iMessages !
Chii Chaunoverengwa Mareti On Pane An iPhone?
Verenga maRisiti zviziviso zvinotumirwa ne iPhone yako kune vanhu vaunotumira iMessages. Kana munhu wauri kutumira mameseji akatumirwa Read Read Maresiti, iwe uchakwanisa kuona izwi racho Verenga pamwe nenguva yavakaverenga iMessage yako. Saizvozvowo, kana iwe Tumira Verenga MaRisiti akatendeuka, munhu wauri kutumira mameseji achakwanisa kuona kana iwe uchiverenga yavo iMessages.
chii chiri data kutenderera pane iphone
Maitiro Ekudzima Verenga Verenga maRisiti Pa iPhone
Kuti udzime maresi ekuverenga pane imwe iPhone, vhura iyo Zvirongwa app uye tora Meseji. Wobva wadzima switch iripedyo ne Tumira Verenga maRisiti . Iwe uchaziva kuti yadzimwa kana switch yakamiswa kuruboshwe.
Zvino kana iwe ukavhura uye kuverenga iMessage, munhu akatumira meseji anozoona chete Kununurwa .
Ndinogona Kutumira Verenga Maresiti Kana Ndichitumira Meseji Meseji?
Kwete, meseji mameseji hautumire kuverenga maretiiti. Saka, kana iwe ukatumira mameseji kune mumwe munhu ane Android kana imwe isiri Apple foni, ivo havazokwanisa kuona kana iwe wakamboverenga meseji yavo. Verenga maRisiti chete kutumira kana iwe mameseji kune mumwe munhu iMessages.
Ko Kana Ini Ndichida Kutendeuka Verenga MaRisiti Kudzoka?
Kana iwe uchingoda kudzosera kuverenga maretiiti kumashure, ingo dzokera mukati Zvirongwa -> Meseji uye batidza switch iripedyo ne Tumira Verenga maRisiti . Iwe uchaziva Kutumira Verenga Maresiti aripo kana switch iri green uye yakaiswa kurudyi.
apuro wachi akateedzana 3 wont batidza
Ungada here Kopi YeRisiti Yako?
Iwe ikozvino unoziva kudzima kuverenga maretiiti pane yako iPhone uye ikozvino vanhu havazozive kana iwe ukaverenga yavo iMessages. Inzwa wakasununguka kusiya chirevo pasi pazasi kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone!